Usebe original ngaphandle logo opharetha ukukhweza i-BlackBerry 9320 Ijika — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Usebe original ngaphandle logo opharetha ukukhweza i-BlackBerry 9320 Ijika
Ingabe front, ingxenye omele iningi icala, inquma ukubukeka of smartphone yakho: inhlanzeko, isitayela kanye nomklamo. Esikhundleni ring bafake ku entsha, uyobe ayigcini BlackBerry yakho, kodwa futhi balahle ukubhekisela esilawulayo ukuze opharetha angaphandle! BlackBerry production.
The Bezel original (front) yiyona phambili, ingxenye omele iningi icala, inquma ukubukeka of smartphone yakho: inhlanzeko, isitayela kanye nomklamo. Esikhundleni ring bafake ku entsha, uyobe ayigcini BlackBerry yakho, kodwa futhi balahle ukubhekisela esilawulayo ukuze opharetha angaphandle! Lokhu ring senziwa BlackBerry, okuyinto isiqinisekiso quality.
Bezel — spare ngokwanele izingxenye esikhundleni on BlackBerry. Ukukhipha usebe — inselelo ochwepheshe bethu ngeke afeze "on the spot", futhi wena akudingeki ukuba ashiye unit okwesikhathi eside. Funda okwengeziwe ikhasi Njengoba ezothatha isikhundla usebe.
Kuleli khasi rim 9320/9315/9310 kuphela elihambisana ukuma indawo izingxenye ezincane. Wena BlackBerry 9220? Wena lapha :) → I-bezel yangempela ene-mount ye-BlackBerry 9220 Curve.
Usebe original ngaphandle logo opharetha ukukhweza i-BlackBerry 9320 Ijika, white 9320BEZEL-O-WT ●
Usebe original ngaphandle logo opharetha ukukhweza i-BlackBerry 9320 Ijika, silver 9320BEZEL-O-SL (HDW-45117-001) ●
silver 9320BEZEL-O-SL (HDW-45117-001)